မွေးရာပါရေတိမ်ဆိုတာ ဘာလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » မ်က္စိက်န္းမာေရး » မွေးရာပါရေတိမ်ဆိုတာ ဘာလဲ
မွေးရာပါရေတိမ် (PCG) ရေတိမ်အမျိုးအစားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောအရည်ဖိအားက သင့်မျက်စိပတ်လည်ကိုဖိကာ မျက်စိအာရုံကြော ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဤရောဂါကို များသောအားဖြင့်မွေးဖွားပြီးခါစ သို့မဟုတ်မကြာမီမှာ တွေ့ရှိတတ်ပြီး နှင့်အများဆုံးကတော့ တစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။PCG ဟာ မျက်စိရဲ့အရည်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းလေးတွေ (trabecular meshwork လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိထဲက ဖွဲ့စည်းမှု) ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု မူမမှန်သဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ aqueous လို့ခေါ်တဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေက မျက်လုံးနောက် iris လို့ခေါ်တဲ့နေရာကနေ ဇကာပေါက်လေးတွေနဲ့တူတဲ့ trabecular meshwork ဆီကို ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းပြီး သွေးကြောထဲကိုရောက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ trabecular meshworkက PCG မှာကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်, မျက်စိရေကြည် တွေစီးဆင်းမှုမကောင်းပဲ မျက်စိအတွင်းပိုင်းမှာ မြင့်မားသောဖိအားရရှိလာတဲ့ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ ဖိအားက မျက်စိ အာရုံကြော ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ချက်ချင်းကုသမပေးလျှင် အမြင်အာရုံကို အမြဲတမ်းဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ မွေးကင်းစကလေးနှင့် ၃ နှစ်သား ကလေးများမှာသာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ PCG အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်တဲ့ အရေးကြီးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေး ၁၀၀၀၀မှာ တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ကုသမှုမရှိတာဟာ ကလေးဘဝမျက်စိကွယ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့အန္တရာယ်ရှိအချက်များကို လျှော့ချကာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူဆွေးနွေးပါ။
မွေးရာပါရေတိမ်ရဲ့ အခြေခံ သွင်ပြင်လက္ခဏာ ၃ခုကတော့
မျက်ရည် အလွန်အကျွံထွက်ခြင်း (epiphora )
မျက်ခွံကျုံ့ညှစ်ခြင်း (blepharospasm )
မွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးက ဤရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုကို ပြသနေပြီဆိုပါက သူတို့မှာ ရေတိမ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ မိဘသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်သလဲ
အစောပိုင်းရောဂါတွေ့ရှိမှုနဲ့ ကုသမှုတွေက ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလာမှုနဲ့ အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအရေးပေါ် အခြေအနေတွေကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့မျက်စိဆဲလ်များနှင့်တစ်ရှူးတွေက မမွေးခင်မှာ ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးရင် မွေးလာတဲ့အခါ ဒီအရည်ကြည်စီးဆင်းမှုဒုက္ခတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အမှန်တကယ်ဖြစ်စေတဲ့ အရာကိုနားမလည်ကြသေးပါ။ အချို့ကိစ္စတွေက မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပြီး အချို့ကတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ဘယ်အရာက မွေးရာပါရေတိမ်ရဲ့ အန္တရာယ်ကို တိုးပွားစေသလဲ
ဘယ်ကလေးက PCG နှင့်အတူမွေးဖွား လာမယ်လို့ ကြိုတွက်လို့မရပါဘူး။ ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပထမနှင့်ဒုတိယကလေးများမှာ ရှိပါကနောက်ပိုင်းသားသမီးများမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေတိမ်ဖြစ်တဲ့ မွေးကာစယောက်ျားလေးဦးရေဟာ မိန်းကလေးဦးရေရဲ့ ၂ဆရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံ မျက်စိတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ ၂ဖက်လုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရောဂါ နဲ့ ကုသမှု
( ဒီအချက်တွေဟာ ကျန်းမာရေး အကြံပေးချက်မဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် အမြဲဆွေးနွေးပါ)
ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့်အဆင့်ပေါ်အခြေခံပြီး တချို့စစ်ဆေးမှုတွေကို ဆေးခန်းများတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ နို့စို့ကလေးတွေမှာ အစာကျွေးပြီးမကြာမီ သို့မဟုတ် အိပ်ငိုက်နေတဲ့အခါ relax ဖြစ်နေတဲ့အခါ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် အားသိပ်စိုက်စရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အပိုဆောင်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းတို့အတွက် အိပ်ဆေး သို့ မေ့ဆေးနှင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချိန်မှာ လုပ်ဆောင်စရာတွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ကလေးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများကြာချိန်နှင့်မိသားစုသမိုင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားမျက်စိရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို အုပ်ထိန်းသူတွေဆီမှာမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါစမ်းသပ်မှုတွေကို ရုံးနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းတွေမှာ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
သူ / သူမအနေနဲ့ အရာဝတ္ထုကို ကိုကြည့်နိုင်မှုရှိ၊ မရှိ နှင့်မျက်စိနှင့်ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုကိုလိုက်ကြည့်နိုင်မှုရှိမရှိကို မွေးကင်းစကလေး၌ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအရာကတော့ အဝေးမှုန်ခြင်း, အနီးမှုန်ခြင်းနဲ့ astigmatism ကို တိုင်းတာတာ ဖြစ်တယ်။ PCG မှာမြင့်မားတဲ့မျက်စိဖိအားကနေ အဝေးမှုန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ဒါဟာ မျက်စိရဲ့ အလျားရှည်လာမှုရဲ့ ရလာဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာအမာရွတ်သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းကနေတော့ astigmatismဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မျက်စိရဲ့အရွယ်အစားကို တိုင်းတာပြီး ကြီးလာမှုရှိမရှိ ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာ၏အချင်းကို calipers သုံးပြီးတိုင်းတာပါတယ်။ မျက်စိ၏အရှည်ကို ultrasound scan သုံးပြီးတိုင်းတာပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာစစ်ဆေးမှုကတော့ မျက်စိကြည်လင်မှုရှိမရှိနဲ့ မြင့်မားသောမျက်စိဖိအားအောက်မှာ မျက်ကြည်လွှာဆန့်သွားတဲ့အတွက် တခါတရံ နောက်ကျောအလွှာမှာ သေးငယ်တဲ့ အပေါက်ကွဲကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာတာကို စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာရဲ့အထူ အတိုင်းအတာကိုလည်း စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
trabecular meshwork ကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုခြင်း
ဤနည်းကို gonioscopy ဟုခေါ်ပြီး အထူးမှန်ဘီလူးနှင့် ကြေးမုံတို့ ပါဝင်ပါတယ်။trabecular meshwork တည်ရှိတဲ့ ထောင့်စွန်းနေရာမှာ ပွင့်နေမှု ကျဉ်းနေမှု ပိတ်နေမှု နဲ့ အခြားအမာရွတ်တွေရှိမရှိဆိုတာ သေချာထောက်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မျက်စိ အာရုံကြောကို ဂရုတစိုက် (ophthalmoscopy သုံးပြီး)စစ်ဆေးခြင်း
ရေတိမ်ကြောင့် အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းလက္ခဏာကိုကြည့်ဖို့ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုံလောက်သော မြင်ကွင်းနဲ့ကြည့်ဖို့ pupil ကို ကောင်းကောင်းချဲ့ထားဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသနည်းကတော့ အမြဲတမ်းပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။ ကလေးငယ်ကို မေ့ဆေးပေးဖို့ဆိုတာ အတော်လေးအန္တရာယ်များတာကြောင့်, ဆရာဝန်များကရောဂါအတည်ပြု ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ မျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်နေတယ်ဆိုရင်, ဆရာဝန်က တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု ချက်ချင်းမလုပ်နိုင်လျှင်, ဆရာဝန်က မျက်စဉ်းဆေး , သောက်ဆေး ဒါမှမဟုတ်အရည်ဖိအားကို လျော့ချဖို့ နှစ်ခုပေါင်းစပ်ကုသပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်အတော်များများက microsurgery လို့ခေါ်တဲ့ ကုထုံး ကိုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ သူတို့ကပိုလျှံနေတဲ့ အရည်များစီးဆင်းဖို့ အတွက် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို သေးငယ်တဲ့ ကိရိယာတွေသုံးပြီးဖန်တီးပါတယ်။ တခါတရံဆရာဝန်က မျက်စိထဲကအရည်ထုတ်ရန် အဆို့ရှင်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပြွန် ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်နည်းလမ်းများအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်က အရည်ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာတွေကို လေဆာနည်းနဲ့ ဖျက်ဆီးဖို့လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မျက်စိဖိအားထိန်းချုပ်မှု အတွက် ဆေးဝါးသတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မွေးရာပါရေတိမ်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်သော လူနေမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများနှင့် အိမ်တွင်းဆေးဝါးတွေက ဘာတွေလဲ?
သင့်ရဲ့ကလေးကို စောင့်ရှောက်စဉ်ကာလတွင်, သင်၏ကလေး သာမန်ကျန်းမာနေကြောင်း သေချာစေဖို့ အထက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကဒီအခြေအနေအချို့နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံနေပြီဆိုရင် ဒီရောဂါကို ရှောင်ရှားရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးချက်ချင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှာဖွေရပါမယ်။
မျက်လုံးပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ။ ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 27, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
Primary congenital glaucoma. http://www.webmd.com/eye-health/primary-congenital-glaucoma. Accessed 26 Feb 2017.
Primary congenital glaucoma. http://eyewiki.aao.org/Glaucoma,_Congenital_Or_Infantile. Accessed 26 Feb 2017.
Primary congenital glaucoma. http://www.webmd.com/eye-health/glaucoma-eyes. Accessed 26 Feb 2017.